को हुन् देउवाले जितेको धनगढीमा कांग्रेसलाई टक्कर दिने हमाल
प्रदेश नम्बर ७ को एकमात्र उपमहानगरपालिका हो, धनगढी। उपमहानगरपालिकाका साथै यो शहर सुदूरपश्चिमको आर्थिक र राजनीतिक केन्द्र पनि हो।
धनगढी पनि पर्ने कैलालीको क्षेत्र नम्बर ६ मा दोस्रो संविधान सभा चुनावमा कांग्रेस सभापति एंव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनाव जितेका थिए। देउवाले छोडेपछि उपनिर्वाचनमा त्यहाँ कांग्रेसका पुष्करनाथ ओझाले जित हात पारे।
२०७० सालमा देउवालाई चुनाव जिताउन ‘सकेको सहयोग’ गरेका उद्यमी गोपाल हमालले धनगढीमा अहिले कांग्रेसका मेयर उम्मेदवारलाई कडा टक्कर दिइरहेका छन्।
५४ हजार ३ सय ६९ मत खसेकोे धनगढी उपमहानगरको मेयरमा कांग्रेस उम्मेदवार नृपबहादुर ओड र हमाल झिनो मतले पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहँदै आएका छन्।
सुरुवाती अग्रता लिएका हमाल ३२ हजार ६ सय १ मत गणना हुँदा भने २०१ मतले पछाडि परेका छन्। कांग्रेसका उम्मेदवार नृप ओडले ७९६७ मत पाउँदा हमालले ७७६६ मत ल्याएका छन्। एमाले र माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार भने उनीभन्दा धेरै पछि रहेका छन्।
कांग्रेसको आधार क्षेत्र मानिने धनगढीमा कांग्रेसलाई नै टक्कर दिने हमाल को हुन र उनी कसरी राजनीतिमा आए त?
‘गएको चैतसम्म चुनाव लड्ने मेरो केही योजना थिएन’, हमालले बुधबार दिउँसो सेतोपाटीसँग टेलिफोनमा भने, ‘अहिलेका कांग्रेस उम्मेदवारले घरमै आएर दाइ नउठनुस् बरु मलाई सहयोग गर्नुस् भनेका थिए। मैले उनलाई हप्ता दिनभित्र टिकट ल्याएर आऊ म सहयोग गर्छु भन्ने वचन दिएको थिएँ।’
तर हप्ता दिनमा कांग्रेसले ओडलाई टिकट दिएन। अन्तिम समयमा मात्र ओडले टिकट पाए। त्यतिञ्जेल हमालले उम्मेदवारी दिने तयारी थालिसकेका थिए। ‘यसरी ख्यालख्यालमै म चुनावमा होमिएँ’, हमालले भने, ‘जिते मेयर बनेर काम गर्छु हारे पनि हाम्रो एजेन्डा स्थापित हुन्छ भनेर साथीहरुले हौस्याए।’
चुनावमा उनी ख्यालख्यालमै लडेपनि सुदूरपश्चिमको विकास र राजनीतिप्रति उनको मनमा पहिलेदेखि नै आगो दन्किरहेको थियो।
टीकापुरका जन्मेका हमालका बुवा रेञ्जरका जागिरे थिए। उनीहरुको परिवार सल्यानबाट टीकापुर सरेको थियो। पढाइका सिलसिलामा उनीहरु धनगढी पुगे। पछि त्यतै बसाइँ सरे।
आइएसम्मको पढाइ सकेका हमालले धनगढीलाई नै कर्म थलो बनाए तर बुवाले जस्तो सरकारी जागिर खाएनन्। आफ्नै व्यवसाय सुरु गरे। ‘२०४० सालमा मेरो काइँलो भाइ ब्लड क्यान्सरले गर्दा बित्यो त्यही साल उसको यादमा हामीले दिनेश नाम दिएर टिनका बक्स बनाउन थाल्यौं’, हमालले भने, ‘व्यापार गर्छु भन्ने पनि कुनै योजना थिएन। गर्दागर्दै राम्रो हुँदै गयो, बढ्दै गयो।’
अहिले दिनेश ग्रुपमध्ये गोपालको स्वामित्वमा दिनेश एग्रो, दिनेश होटल, दिनेश एफएम र दिनेश मोटर्सजस्ता व्यापार छन्। उनका दुई भाइ श्याम र देवेन्द्रका पनि दिनेश कन्सर्न, दिनेश फोर ह्विल, दिनेश अटो मोटिभ्स, दिनेश मेटल, दिनेश पेन्ट्स, दिनेश कम्प्युटर्स लगायतका व्यवसाय छन्।
कैलालीमा कहलिएका हमाल १४ वर्ष उद्योग वाणिज्य महासंघ कैलालीको अध्यक्ष भए। त्यही बेला उनले आफ्नो व्यापारका साथसाथै सुदूरपश्चिमलाई चिनाउने काम पनि गरे। तीमध्ये गेटा विमानस्थल कालोपत्रे, सुन्दर सुदूर पश्चिम अभियान र कैलाली महोत्सव हुन्।
‘सुन्दर सुदूरपश्चिम अभियान चलाउनुभन्दा पहिले न कसैले सुदूरपश्चिमलाई गन्तव्य मान्थ्यो न त यहाँका मान्छेमा नै आत्मविश्वास थियो। त्यो अभियानमा हामीले सुदूरपश्चिममा गरिबी र छाउपडी मात्र छैन। सुन्दरता र सम्भावना पनि छ भन्ने देखायौं’, हमालले भने, ‘त्यसको प्रभाव अहिले परेको छ। सुदूरपश्चिममा पर्यटक बढेका छन्। यहाँका मान्छेले पनि आत्मविश्वासका साथ यहीँ लगानी गरिरहेका छन्।’
उनले सुरु गरेको कैलाली महोत्सव अहिले सुदूरपश्चिम महोत्सवका नाममा हरेक वर्ष धनगढी आयोजना हुन्छ। ‘व्यापारका सिलसिलामा र अन्य सामाजिक काम गर्दा पनि मेरो मनमा जहिले पनि धनगढीको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने लागिरहन्थ्यो,’ हमालले भने, ‘देउवाजी यो क्षेत्रबाट उठ्ने भएपछि प्रधानमन्त्री बनिसकेको मान्छे यो क्षेत्रको सांसद बनेपछि छिटो विकास होला भनेर सक्दो सहयोग गरेको थिएँ।’
त्यसो त देउवासँग उनको पुरानो पारिवारिक चिनजान पनि छ। हमालका बुवा पनि कांग्रेस समर्थक थिए। पञ्चायतकालमा देउवा हमालको घरमा आइरहन्थे।
देउवा पत्नी आरजु देउवा राणाका भाइ भूषण हमाल साथी भएकाले पनि उनीहरुको पारिवारिक सम्बन्ध राम्रै छ। ‘मैले चाहेको भए कांग्रेसबाट पनि टिकट पाउन सक्थें, एमाले बाहेकका अरु सबै पार्टीले हाम्रो दलबाट उठ्नुस पनि भनेका थिए’, हमालले भने, ‘तर मैले कसैको प्रस्ताव मानिनँ। किनकी पार्टीको उम्मेदवार बनेर जसरी पनि मेयर बन्ने मेरो योजना होइन।’
अहिले राजनीतिक दललाई सच्चिने अवसर दिने र जनताले के चाहिरहेका छन् भन्ने सन्देश दिन आफूले उम्मेदवारी दिएको उनले बताए। ‘यहाँ व्यवस्था बदलियो तर अवस्था बदलिएन,’ हमालले भने, ‘पहिला जनता राणा र राजाको मुडमा चल्नुपथ्र्यो। अहिल नेताको मुडमा चल्नुपर्छ। जनता नेताको मुड अनुसार होइन नेता जनताको मुड अनुसार चल्नुपर्छ भनेर मैले उम्मेदवारी दिएको हुँ। यो सन्देश कुनै पार्टीको उम्मेदवार बन्दा दिन सक्दैनथें।’
राजनीतिक दलबाट उम्मेदवार बन्न उनलाई अर्को कुराले पनि दिएन। उनका अनुसार नेता भइसकेपछि दुईटा कुरा गनुपर्छ। माथिको निर्देशन मान्नुपर्छ तलकाको गुनासा सुनिदिनुपर्छ। ‘कार्यकर्ता पाल्ने कि आएको पैसाले विकास गर्ने?’, हमालले प्रश्न गरे, ‘फेरि उनीहरु टिकट पनि योग्यता र क्षमता नहेरी पार्टीमा कति वर्ष योगदान गर्यो भनेर दिन्छन्।’
त्यसो भए के उनले चुनाव जित्लान् त?
जसरी पनि चुनाव जित्नु पर्ने आफ्नो उद्देश्य नभएको उनले बताए।
‘म राजनीति गर्ने मान्छे होइन हेर्नुस्, कुन वडाबाट कति मत आउँछ हिसाब गरेर बस्ने। तर अहिलेसम्म अपेक्षा गरेभन्दा अलि कम मत आयो’, हमालले भने, ‘अब पनि आशा त मारेको छैन। हारें भने पनि मैल पोे हार्छु मेरो एजेण्डाले त जितिसक्यो नि।’
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार २१, २०७४, ०३:४०:२४